Ny Sakafo malefaka: Sakafo inona no hohanina ary iza no tsy? | Nutri Diet
Raha efa naheno ny sakafo tsy manjary, Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia tsy drafitra mampihena ny lanja very andiana kilao satria mitranga amin'ny karazana sakafo hafa toy ny ny sakafo atkins na ny Perrone. Raha liana amin'izany ianao ary te hahafantatra misimisy kokoa momba ny sakafo malefaka dia hazavaiko ny zava-drehetra Izay tokony ho fantatrao momba izany, inona no ahitana azy ary iza ny olona fa tokony hanaraka an'io izy ireo.
1 Inona ny sakafo malefaka?
2 Inona avy ireo sakafo azonao hanina amin'ny sakafo malemy?
3 Sakafo voarara ary tsy maintsy ialana amin'ny sakafo tsy madio
4 Ohatra sakafo amin'ny sakafo malefaka
4.2 sakafo atoandro
4.3 sakafo hariva
5 Araho ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja
6 Torohevitra farany momba ny sakafo tsy manjary
Inona ny sakafo malefaka?
Ny sakafo malemy dia drafitra fisakafoanana maharitra faharetana dokotera no manome alohan'ny aretina fandevonan-kanina samihafa na aorian'ny karazana fidirana an-tsehatra amin'ny fandidiana. Mifidy an'ity karazana sakafo ity ny dokotera, amin'izay ilay marary afaka mihinana sakafo mora foana ary afaka mitsako sy mitelina tsy misy olana ianao. Amin'ny tranga maro dia matetika io sakafo io no arahina rehefa vita fisotroan-dronono ary ny marary dia vonona hitelina miadana sy mitandrina. Ny firafitry ny sakafo, dia hiova arakaraka ny toe-pahasalaman'ny marary.
Inona avy ireo sakafo azonao hanina amin'ny sakafo malemy?
Betsaka ny sakafo mahafeno fepetra malefaka ary izany dia mety indrindra hampidirina ao amin'ity karazana sakafo ity, izay anarahan'ilay olona manaraka azy vola lany mitsako, mitelina na mitaky fandevonan-kanina maivana sy tsy sarotra. Ny sasany amin'ireo sakafo mety ho ampahany ny sakafo malefaka Izy ireo dia:
Porridge sereal toy oats na semolina varimbazaha.
Pasta nandrahoina mandra-malama sy mora hanina.
voankazo malefaka sy malefaka toy ny akondro masaka, cantaloupe, na watermelon.
Voankazo masaka na nandrahoina toy ny poara na paoma.
Legioma nandrahoina tsy misy hoditra ary azo kosehina mora foana toy ny karaoty na cauliflower izy ireo.
Vokatra vita amin'ny ronono toy ny yogourt na ny fromazy fanosotra.
Ireto misy ohatra vitsivitsy fotsiny amin'ny sakafo azonao atao raiso tsy misy olana olona manaraka sakafo malefaka.
Sakafo voarara ary tsy maintsy ialana amin'ny sakafo tsy madio
Misy sakafo maromaro inona no tokony hialanao raha manaraka ity karazan-tsakafo ity ianao satria ratsy amin'ny fandevonan-kanina tsara na sarotra ny mandevona na mitsako. Ny sakafo fady sasany dia:
Mofo misy voa sy voa hafa.
Legume misy hoditra henjana toa sakamalao na tsaramaso.
Paoma, paiso na mananasy.
Hena mena, akoho na vorontsiloza.
Saosisy na hamburger.
Ohatra sakafo amin'ny sakafo malefaka
Betsaka ny olona no mieritreritra fa ny sakafo tsy madio dia mahasalama anao ho mankaleo sy hentitra, na izany aza, etsy ambany dia hasehoko anao ny ohatra sasany menus sasany ahafahanao mankafy sakafo isan-karazany mandritra ity karazan-tsakafo sy mihinana kely amin'ny zavatra rehetra.
Atody mikorapaka miaraka amin'ny fromazy grated, fromazy miempo ary melon kely.
Atody nandrahoina ary yaorta mamy.
Smoothie vita amin'ny ronono, akondro, vovoka kakaô, yaourt ary zava-mamy na siramamy kely.
Saladà tanà miaraka amin'ny mayonnaise sy zava-manitra sasany. Apple puree.
Salady atody miaraka amin'ny mayonnaise sy zava-manitra. Salady Melon.
Pea puree. Voahangy mamy.
Mihorona miaraka amin'i silaka avokado.
Salady Pasta Miaraka amin'ny Tuna.
Salmon voaendy miaraka amin'ny ovy.
Ny epiche episy sy episy kôlifera.
Araho ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja
Zava-dehibe tokoa ny fahafantaranao fa ny fihinanana sakafo malefaka dia tsy mifanohitra amin'ny fihinanana sakafo karazana salama sy voalanjalanja izay ny vatanao no mandray ny zavatra rehetra ny otrikaina ilaina ho an'ny fandidiana tsara an'io. Tsy mety diso vondrona sakafo manan-danja toy ny voankazo, legioma, vokatra vita amin'ny ronono na serealy. Dia homeko anao a toro-làlana ka ny vatanao dia mahazo sakafo ara-pahasalamana:
Aza mihinana sakafo be loatra amin'ny fotoana rehetra manankarena siramamy, indrindra ireo izay tsy misy lanja ara-tsakafo.
Ampidiro ao anaty sakafo ny sakafo ny loko (maintso, mavo na volomboasary) hahazoana antoka fa mihinana fihinanana vitamina ao amin'ny vatanao.
Tsy maintsy mihinana farafaharatsiny ianao Kaloria 1.200 XNUMX eo ho eo isan'andro. Raha tsy mihinana kaloria kely noho ny voalaza etsy ambony ianao isan'andro, dia ny vatanao no zavatra mahazatra indrindra manomboka very hozatra amin'ny fomba mandroso.
Mitandrema tsara rehefa tonga fihinanana matavy. Ny hoe manaraka sakafo malefaka ianao dia tsy midika hoe manana fahalalahana tanteraka hihinana karazan-tavy rehetra ianao. Mba hisorohana ny fihinanana tavy tsy mifandanja toy izany dia tsara kokoa ny mihinana vokatra vita amin'ny ronono tanteraka skimmed na skimmed ary ampiasao ron-kena kely mba hanomezana tsiro ny purees.
Torohevitra farany momba ny sakafo tsy manjary
Raha noho ny antony samihafa no anarahanao ny sakafo malefaka dia tena zava-dehibe ny tsy hahavery anao ny antsipirian'ny sasany torolàlana na torohevitra farany momba ny sakafo. Miezaha mitsako tsara ary mihinana miadana, mba hanamorana ny fandevonan-kanina araka izay tratra ary tsy manana Olana amin'ny vavony mahazatra toy ny entona manelingelina. Rehefa avy misakafo ianao, manandrama miala sasatra mandritra ny minitra vitsy ary hanamora ny fandevonan-kanina toy izany.
Ny tena torohevitra tsara dia ny fitazonana ny sakafo malefaka mandritra ny fotoana tokony ho 3 0 4 andro ary avy eo mandehana kely na kely hampiditra karazana sakafo bebe kokoa hahatratrarana sakafo ara-dalàna izay ahafahanao mihinana karazan-karazany rehetra otrikaina sy vitamina ilaina ho an'ny vatanao. Raha tsikaritranao fa afaka andro vitsivitsy, dia mbola manana olana ianao rehefa mihinana sakafo sasany, dia tokony manatona mpitsabo anao.
Araka ny hitanao sy novakinao tao amin'ity lahatsoratra ity, dia azo atao ny manatanteraka sakafo salama, mahay mandanjalanja ary manankarena na dia mihinana sakafo malefaka ianao. Manaraka andian-torolàlana maromaro miaraka amin'ny famoronana kely Afaka mamorona menio mahaliana ianao izay manampy anao ho sitrana haingana amin'ny aretinao ary manome otrikaina tsara amin'ny vatanao.
Ity ambany ity dia asehoko anao ny horonan-tsary iray izay hamafana ny zava-drehetra ary inona avy ireo sakafo azonao ampidirina amin'ity karazana sakafo ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ny sakafo malemy
dokotera dia hoy izy:
Ity no soso-kevitra ratsy indrindra amin'ny sakafo matsiro izay novakiako.
Mamaly amin'ny dokotera
Torohevitra hampihenana ny lalan-drantsika miaraka amin'ny voatabia maitso sy mena
Mandoro tavy sy kaloria amin'ny alàlan'ny mandeha